सुनचाँदीकाे काराेबार गर्दै हुनुहुन्छ ? कति छ आजकाे मूल्य ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
सुनचाँदीकाे काराेबार गर्दै हुनुहुन्छ ? कति छ आजकाे मूल्य ?
काठमाडाैँ / स्थानीय बजारमा आज मंगलबार सुनचाँदीकाे मूल्य स्थिर भएकाे छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार साेमबार प्रतिताेला ९० हजार ६०० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे छापावाल सुन आज पनि साेही मूल्यमा काराेबार हुने भएकाे छ । साेही परिमाणकाे तेजाबी सुनकाे मूल्य आज ९० हजार १०० रुपैयाँ पर्ने महासंघले जनाएकाे छ ।
यता, चाँदीकाे मूल्य पनि स्थिर भएकाे छ । महासंघका अनुसार आज चाँदी एक हजार २०० रुपैयाँ प्रतिताेला काराेबार हुनेछ ।
थप समाचार : काग स्पर्शजनित दोष मेटाउन हजारौँ भक्तजन पुगे कागेश्वरी धाम
कागेश्वरी कागले छोएमा र शरीरमा कागको विष्टा परेमा अशुभ भयो भनी दोष मुक्तिको उपाय खोजी गर्ने प्रचलन प्राचीनकालदेखि हाम्रो समाजमा रहेको पाइन्छ ।
यो दोषबाट मुक्तिको पहिलो उपायका रुपमा राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगमा रहेको कागेश्वरी महादेवको दर्शन हो भन्ने मान्यता छ ।
वर्षभर कागले छोएका मानिस भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिन पूजा आराधना एवं दर्शनका लागि यहाँ आउने गर्छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलमा रहेको काक गङ्गेश्वर घाटमा स्नान गरी त्यहाँको जल लिएर कागेश्वरी धाम जाने गरिन्छ ।
यसै मान्यताका आधारमा बिहानैदेखि हजारौँ भक्तजनको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ स्थित कागेश्वरी धाममा भीड लागेको छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल अष्टमी अर्थात् कागेअष्टमीसमेत भनिने आजकै दिन काठमाडौँ जिल्लाको उत्तरपूर्वी कुनामा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कागेश्वरी मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ ।
यसै अवसरमा कागेश्वरीमा हरियो मकै चढाएमा कागले बारीमा लगाएको मकै नखाने धार्मिक विश्वास रहेको छ । यस विश्वासका आधारमा हरियो मकै बोकेर आउन भक्तजनको पनि कागेश्वरी महादेव मन्दिर क्षेत्रमा भीड लागेको छ ।
श्रावण शुक्लपूर्णिमा अथवा गङ्गा दशहरा पर्वका अवसरमा रसुवाको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गोसाइँकुण्डमा पुगेका भक्तजनले त्यहाँबाट ल्याएको जल आज कागेश्वरीमा चढाउनुपर्छ भन्ने विधिसमेत रहेको छ । गोसाइँकुण्ड पुग्नेले कागेश्वरीमा आई आजका दिन जल नचढाए धार्मिक यात्रा पूरा नहुने जनधारणा छ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा लाग्ने मेलामा देशविदेशबाट भक्तजनको भीड लाग्छ । कोरोनाअघि नगरपालिकाले तीन दिनसम्म मेला गरी यो पर्व मनाउने गरेको थियो ।
कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले गत वर्ष र यो वर्ष पनि मेला नगरी पूजा आराधना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनुभयो । कागेश्वरी धामलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्न नगरपालिकाले काम गरिरहेको उनले भने । धाम जान पहिलेको भन्दा सडक सुधार गरिएको छ । यहाँको महत्वका विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने कामलाई नगरपालिकाले प्राथमिकता दिएको छ ।
एक हजार किलोको अष्टधातुको कागको मूर्ति बनाउन स्थानीयवासीले धातु दान गरी सहयोग गरेका छन् । विसं २०७२ मा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य एवं हाल वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य फुयाँलको अग्रसरतामा यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन ७ गते महोत्सव शुरुवात् गरिएको छ ।
कागेश्वरीमा लाग्ने मेला भर्न काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका साथै नजिकका नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रपलाञ्चोक, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली लगायत जिल्लाका मानिसको बढी भीड लाग्ने गरेको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट आई काठमाडौँ उपत्यकामा बसोवास गर्ने मानिस पनि कागको स्पर्शबाट बच्न आजका दिन कागेश्वरी जाने गर्छन् ।
सत्य युगमा वन विहार गर्न निस्कनु भएका भगवान् महादेव धेरै दिनसम्म कैलाश फर्कनु भएन । खोज्न निस्कनु भएकी माता पार्वतीले धेरै तिर भौतारिँदा पनि महादेवलाई भेट्नुभएन । भगवती पार्वती निराश भएर कैलाश फर्कनै लाग्नुभएको थियो ।
त्यति नै बेला चिसो काग अहिले कागेश्वरी महादेव रहेको स्थानमा ध्यानमग्न महादेवलाई आफ्नो चुच्चोमा च्यापेको जल चढाउन का...का... गरेर कराएको सुनियो । माता पार्वतीले उक्त स्थानमा के रहेछ रु भनी हेर्दा भगवान् महादेवलाई फेला पार्नु भएको कथा विभिन्न पुराणमा उल्लेख गरिएको छ ।